The Semalt Islamabad Expert On Kuisa Google Analytics Kuchenesa Ghost Referrer
The spam muGoogle Analytics yava nyaya yakakomba. Nokuda kwemafashamo ekutsvaga kutsvaga kubva kune nzvimbo dzevanhu vakuru uye mabhizinesi evanhu, webmasters vakave vakavhiringidzwa nezvose zvakasarudzwa zvavanogadzirisa kuti vashandise dambudziko risingabatsiri nzvimbo dzavo dzinowanikwa. Hapana chikonzero chekutyisidzira nokuti kuisa Google Analytics kuvanza referrer spam zvakajeka zvikuru. Asi kutanga, iwe unofanirwa kunzwisisa kuti sei vakatumira spam mabasa.
Kana iwe uchida kuti vanhu vashanyire nzvimbo yako uye vanoziva nezvehutano hwemotokari yako, unofanira kukanganisa maitiro matsvuku eSEO.
Nyanzvi yepamusoro Semalt , Sohail Sadiq, inopa pano chiito chinokurudzira panyaya iyi - san jose computer consulting.
Zvinogona kunge zvisingabviri kuti chero munhu upi zvake aparadze kurererana spam sezvo inokanganisa nhamba dzako uye inokuvadza nzvimbo yako yekutsvaga kusvika pane imwe. Ndicho chikonzero iwe unofanira kuchibvisa kubva kuGoogle Analytics account nokukurumidza. Darodar.com, priceg.com, iloveVitaly.com, hulfingtonpost.com, uye blackhatworth.com ndiyo inonyanya kufarirwa nevanhu vanokonzera kushungurudzika nevashandisi veGoogle Analytics.
Kana ukacherechedza spike mumugwagwa mushumo weGoogle Analytics, kupindura kwako kwechinguva kungave kunofadza. Asi iwe unofanirwa kunetseka nezvehutano hwemotokari yako uye kuwedzera kwehuwandu hwewebsite yako. Mikana ndeyokuti wekutumira spam achashanyira nzvimbo yako ne 100% bounce rate uye nguva yakashandiswa pawebsite yako zero yechipiri. Usati wafunga chero chimwe chinhu, iwe unofanira kuzvibvunza pachako "kana iri chitengesi chiri chechokwadi kana kwete." Kana zvisina kudaro, unofanira kutora matanho ekubvisa spammers. Nokuda kweizvi, tsvaga mavambo emugwagwa wako. Enda kuIkutsvaga> All Traffic> Zvikamu Zvokufambisa uye chengetedza mamiriro emigwagwa..Edza kuongorora kuti kushanyirwa kuripo kunobva kupi.
Kusarura kwakanyanya kwekutumirwa ndeyekuti vanodya huchenjeri hwewebsite yenyu uye vanowedzera kuwedzera kwehuwandu, hunochinja injini yekutsvaga yakatarwa mumazuva mashoma.
Kugadzirisa dambudziko iri
Kana iwe ukanyora pachikwata cheHulfingtonPost.com kana imwe sangano re spam, unofanira kuvhara web browser yako nekukurumidza. Zvadaro unogona kuzvidzorera zvakare uye bvisa makiki uye nhoroondo kuti uve nechokwadi chekuchengeteka kwako. Zvakakosha kuziva kuti zvakasiyana siyana zve spam zvinogona kushandiswa nenzira dzakasiyana-siyana. Zvimwe zvacho zvakakurukurwa pasi apa.
Iyo inofamba pamusoro pewebhu uye inotora ruzivo rwezvarwo. Iyo inoita mabasa akasiyana-siyana kuburikidza nekutsvaga pahutano hwako uye kukukoka iwe kuti unyore pane zvikwangwani zvinoshungurudza. Iyo inowanzobva kune dzakasiyana mazita eIndaneti, uye haugone kudzivisa mutsauko nekusiya maPs mubhuku reGoogle Analytics. Zvisinei, unogona kuvhara iyo yako .htaccess mafaira.
Kuendesa mweya hakushanisi nzvimbo yako. Mienzaniso yayo yakawanda ndeye darodar.com uye ilovevitaly.co. Iwe unogona kufunga kugadzirisa iyo .htaccess file, asi hazvizokubatsiri uye hazvina maturo nokuti mweya inotumira kune simba chaizvo kuti uite nayo. Iwe haugoni kuvhiringidza kushanyirwa kwavo nezvose, asi iwe unogona kuchengetedza nzira yavo mu account yako yeGoogle Analytics. Vanenge vachida kunyengedza kutsvaga kweGoogle uye kushandisa maIndaneti ekutsvakurudza zvisina kukwana kuita mabasa avo. Mikana ndeyokuti ID yako yakatsvaga uye yakanyorwa nekutumira spam, uye ikozvino kunoshanyira kunoonekwa mukuGoogle Analytics. Iwe unofanirwa kushandisa ma filters kudzivirira spam uye wobva wawedzera webhusaiti yehusaiti muRefrefer Exclusion list.